श्रीमान विदेशमा, यता श्रीमतीलाई यौ’न चाहाना बढ्न थालेपछि…. – Hamro Nepali Samachar
Home/ समाचार/श्रीमान विदेशमा, यता श्रीमतीलाई यौ’न चाहाना बढ्न थालेपछि….
उनलाई आफ्ना सासुससुराले पनि सहयोग नगर्ने भने होइन। सँगै श्रीमान का मितले पनि केही समस्या पर्दा पानो देवीलाई सहयोग गर्दै आए। सहयोग गर्ने क्रममा पानो र श्रीमानका मित नजिकिँदै जाँदा एकअर्कालाई प्रेम गर्न थाले। उनीहरूको अस्वाभाविक हिमचिमलाई सासुससुराले मन पराउन छाडे।
तर, पनि उनीहरूले दूरी कायम गर्न सकेनन्। जस कारण श्रीमान विदेश रहँदा भएको यौ न चाहनालाई पानोले श्रीमानका मितबाट पूरा गर्न थालिन्। श्रीमान विदेश गएको तेस्रो महिनाबाटै पानोदेवी र उनका श्रीमानका मितबीच यौ’न सम्बन्ध सुरु हुन थालेको र अहिले पनि निरन्तर यौ|न सम्बन्ध रहने गरेको छ।
‘यौ न चाहना सबैमा हुन्छ, नौ वर्ष भयो श्रीमान नआएको, उसले (श्रीमानका मित) मलाई श्रीमानले भन्दा बढी माया गर्छ। हामी नजिक हुँदा जाँदा यौन सम्बन्ध पनि हुन थाल्यो। र अहिले पनि हामीबीच यौ न सम्बन्ध हुने गरेको छ,’ पानोदेवी सुनाउँछिन्।
‘यौ न चाहना मार्न सकिँदो रहेनछ। घरमा सासुससुराले गाली गर्न थालेपछि बिरामी छु भन्ने बाहना बनाएर लजमा गएर मितसँग (श्रीमानका मित) यौ|न चाहना मेटाउँदै आएकी छु,’ उनी भन्छिन्।
उनीहरूबीचको सम्बन्धलाई लिएर घरमा मात्र होइन समाजमा पनि कुरा काट्न थालेको पानोदेवी बताउँछिन् । तर, यौ|न इच्छा मार्न नसक्दा घर र समाजको प्रतिक्रियालाई बेवास्ता गरेर मितसँग यौन सम्बन्ध राख्दै आएको पानोदेवी सुनाउँछिन् ।
कल्पनालाई सहयोग गर्न उनको देवर अविवाहित हुन् । भाउजुलाई सहयोग गर्ने क्रममा नजिकिएका देवरसँग कल्पनाको यौन सम्बन्ध रहन थाल्यो । ‘यस्तो हुन्छ भनेर सोचेको थिइन,’ कल्पनाले भनिन्, ‘तर, नजिक हुने क्रममा यौ न सम्बन्ध रहन गयो । यौन इच्छा धेरै दिन मार्न गाह्रो हुँदो रहेछ ।’
देवर आउँदा कसले शंका नगर्ने र मन मिलेपछि यौन सम्बन्ध रहन सजिलो भएको कल्पनाको अनुभव छ । उनी भन्छिन्, ‘घरमा निर्धक्क भएर आउन सक्ने मान्छे पाएको र मन मिलेपछि यौ न सम्बन्ध हुन थाल्यो । छोरा विद्यालय गएका बेला देवरसँग यौ न सम्बन्ध राख्ने गरेको छु ।’
वर्षमा एक महिनाका लागि आउने श्रीमानबाट सधैँका लागि यौन तृप्त हुन नसकिने कल्पना बताउँछिन् । ‘श्रीमान वर्षमा एक पटक एक महिनाका लागि आउनुहुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, फेरि श्रीमान विदेश गएपछि यौ|न चाहना बढ्ने त्यतिखेर देवरसँग यौन सम्बन्ध राख्छु ।’
यौ|न चाहना सबैको हुन्छ, कसैले दबाएर राख्छ, कसैले दबाउन नसकेर आफूले चाहेअनुसारको वातावरण र साथी पायो भने यौन सम्बन्ध राख्ने गरेका घटना देखिएको राजविराज नगरपालिका–१ कि कविता यादवले बताइन्।
श्रीमती वैदेशिक रोजगारमा रहेका बेला स्वदेशमा रहेका श्रीमानले पनि परस्त्रीसँग यौन सम्बन्ध राख्ने गरेको केही घटना देखिन्छ । पुरुष वा महिलाले अवैध यौ|न सम्बन्ध राख्दा परिवारमा विचलन आउने गरेको छ ।
मध्यरातमा महिलाको कोठामा झ्यालबाट छिरेका यी युवाले के गरे यस्तो ?
दशैंका लागि नयाँ नोट वितरण शुरु हुँदै , कहाँ कहाँ साट्न पाईन्छ हे,र्नुहोस